Ho aiza ireto taranaka? | NewsMada
Ho aiza ireto taranaka?
Nihena tanteraka ny tahan’ireo afaka fanadinana BEPC tamin’ity taona ity raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa. Misy amin’ireo afaka ireo ny nomena naoty ambanin’ny 10/20 amin’ny salanisa ankapoben’ny taranja rehetra. Inona ary ny mahatonga izao? Ilana seminera goavana indray ve handinihana ny olana? Sa hoe tsy rototra intsony amin’ny fianarana ny ankizy miala sakana, amin’izao fotoana izao. Hahagaga ve raha maro ny bevohoka mialoha ny fotoana nefa mbola mianatra sy tsy ampy taona. “Efa niova ny tontolo”, hoy ireo mpanaboka ny fiarahamonina malagasy fahiny. Milalao tambajotra sy serasera izao no malaza. Mety hahazoana volabe tampoka. Malaza haingana rehefa miteniteny foana sy manao fomba tsy fanao rehetra izao. Santionany ireo mpanao politika milaza antsanga tsy aman’orana be mpanaraka sy maro mpitia. Adihevitra mirefarefa amin’ny tany no be mpankafy. Ireo maneho sary sahisahy no be mpijery. Dia inona moa izany sisa ilay fanabeazana malagasy miainga amin’ny fahendrena sy ny soatoavina. Lasa voarabirary sy atao tsinontsinona ka henatra ho an’izay mbola mifikitra amin’izany.
Ny tanora ankehitriny, zavatra hafa mihitsy ny manahirana sy mahasarika azy ireo. Mihaino hira mafy be eny an-dalana, mizara ny zavatra iainana rehetra amin’ny tambajotra sosialy. Manao fitafy mampiseho ny tsy tokony ho hita ka mety hisarika amin’ny fanirian-dratsin’ny sasany. Ny fidorohana zava-mahadomelina, manaraka eo ihany. Sahiran-tsaina ny ray aman-dreny sy ny mpitaiza zatovo. Inona izany ny hatao manoloana ity fahalovana manomboka mahazo faka ity? Ny ray aman-dreny ve no omena tsiny fa tsy mahafehy intsony ny zanany, sa ny rafitra mihitsy no mila amboarina eny ifotony. Raha hitohy izao, tsy ilaina intsony ny fanadinana hitsapana fari-pahaizana.
Dieny izao, mila fandraisan andraikitra lehibe ny mpitondra satria efa mivarilavo ny tanora ankehitriny. Tsy tia fianarana intsony fa manantena hoavy mahafinaritra ao anaty revy samihafa. Mampanahy ny hoavin’ireto taranaka.